Dhumaatii Arsedee Booda Gaaffii Gubaa « QEERROO
Dhumaatii Arsedee Booda Gaaffii Gubaa
Mootummaan Sanyii balfattuu TPLF uummata Oromoo daa’ima amatee habaaboo fi marga qabatee nagaa Waaqa isaa galata galchuuf qopha’ee irratti qileensa keessaa fi lafa irraan waraana bantee Haroo Arsedee irratt gaafa Onkololessa 2, 2016 lubbuun Oromoo hedduu akka tasa badu gootee jirti. Mootumman kun hammeenya hiriyyaa hin qabne daddabaltee ilmaan Oromoo irratti akka raawwachaa jirtu raga barbaacha hin deemnu.
Dhuumaatiin Arsedee warra kaan irraa kan adda godhu itti yaadamee plaanan hojii irraa ooluu isaa ti. Guyyaa kana akka Uummatni Oromoo milliyoonan lakkawamu ayyaanefachuuf bahu mootumaan kun bareechitee beekti. Bakki kun bakka hojiin mootummaa fi qabeenyi mootummaa jiru miti. Namni mootummaaf hojjetu illee waan achi dhaquuf hin jiru. Kanfaauu, mootummaan kun uummata Oromoo irratti waraana geggeessuuf qophii utuu hin qabu tahe waraanni qileensaa fi waraanni lafa bakka kanatti waan argamaniif sababni tokko illee hin jiru. Mootummaan TPLF karaa ifa taheen saynii Oromoo akka lafa irraa duguggaa jiru dabale daddablee addeesse.
Yaroo kanatti gaaffii gubbaan uummatni Oromoo maal gochuu qaba? isa jedhu deebisuu danda’u dha. Inni duraa qabsoo bilisummaa kana karaa nagaa bakkan gahuu dandeenya yaadni jedhu , yaadni isaa bareedaa fi eebsaa tahee waan hojiin mulachuu danda’u akka hin taane hubachuu qabna. Qabsoo keessatti dhaadannoo fi tooftaan yaroo wajjin xinxalammee kan yaroo wajjin deemuun bakka bu’amuu qaba. Harka lamaan mataa irra qabannee dhaabbachuun nagaa barbaanna jechuu akka tahe biyyi lafaa iyyuu nuuf hubate.
Waan hubachuu qabnu garuu biyyi lafaa nuuf birmachhuufis tahe nu gargaaruuf qophee hin qabu. Kan of gargaree rakkina kana keessaa of bahuu qabu uummata Oromoo mataa isaa ti. Akkuma Uummata Oromoo uummatni Sidamaa, Gambeela fi Ogaaden harka TPLFn dhumeera. Waraana Eritrea fi Somalee irratti TPLF ooftuun isaan irraas dhiigni baayyeen dhangala’ee jira. Uummata Amharaa illee bara kana akkuma keenya dhiiga dhangalaasaa jirti. TPLF walii gala uummata Gaafa Afrikaa jiraatuuf dhukkuma xannachaa ‘cancer’ fayyamuu hin dandeenye jechuu ni danda’ama. Dhukkuba xannachaa kana balleessuu uummata Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraatan duwwaa utuu hin taane kan Eritrea fi Somalee wajjin wal gargaaruu qabna.
Uummatni Oromoo karaa isaa kan gochuu qabu keessa. Inni duraa maqaa Oromoo of mogaasee ijaarsi meeshaa diinaa isa duraa tahee kan maqaa OPDOn waamamu Dhumaatii Arsedee booda faca’u qaba. Uummata Oromoo keessati hojjechuuf aangoo seera fi moraala qabchuu hin danad’u ( OPDO has no legal and moral authority to operate within Oromiya) . Uummatni Oromoo qabeenyaa dhaabbatuu fi socho’u , wajjiraa fi hojjetota OPDO kan tahe mamii tokko malee barbaddeessuuf haqa qaba. Qondaloon OPDO TPLF wajjin walii galanii uummata Oromoo ficcisisaa jiran akka seeran gaaffataman gochuu irratti hojjetamuu qaba.
Namchi afaan bal’aa akka sari waan TPLF itti kenite bahee maqaa prime minister Itoopiyaan gadi bahee qaanii tokko malee sobu hattattamaan akka hojii isaa kana irra bu’u isaa gaafanna. Hayile Mariam Dasalegn dhumaati uummata biyya Impaayeera Itoophiyaa sana keessatti gahuuf gahaa guddaa waan qabuuf innis mana seeratti dhiyaachuu warra qaban keessaa tokko. Akka inni murtii TPLF dabarsituu keessaa aangoo tokko illee hin qabanne beekamaa tahee utuu jiru inni garuu fedhii isaan afaan TPLF tahee dhaabbchuun akka badii TPLF hojjechaa jirtu kana hundaa of itti fudhatu of godhee jira.
TPLF haala duree tokko malee warraa ishee biyya Oromoo keessa akka hattattamaan baaftu gaafanna. Inni lammaffaa ilmaan Oromoo kumaatan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran akka haal duree tokko malee hattattamaan gadi dhiifaman dabalee gaaffanna . Qondalonni TPLF hammenyi namumaa ( crime against humanity) rawwatan akka seera biyya lafaatti dhiyaatan. Qabeenyi TPLF, kan dhaabbatuu fi socho’u, namootni TPLFiif hojjetan ykn bifa kamnuu gargaran dhalootan Oromoo tahan ykn sanyi biraa tahan of keessaa haleeluuf haqa qabna. Haleelamuus qabu.
Uummatni Oromoo naanno jiraatutti gurmaa’e hunmna diinaa dadhabduu taate cabsee meeshaa lolaa boji’ee of hidhachiisuus filmaata duraa tahuu qaba. Gochi uummatni Oromoo harka mataa irraa kaawwatee dhaabbatu dhumaa jiru kun diina keenya bayyee nu irratti goobsee jira. Waan nu tufataniif jecha humna xiqqaan baayyee keenya tumuuf yaalaa jiru. Amma ammaatti waan godhan isaaniif milka’ee jira. Kana booda harki keenyaa meeshaa tahe qabachuu qaba. Meeshaan uumaan qabnu waan akka eeboo, haaduu, qotoo, mancaa, shimalaa fi wkf tufatamu hin qabu. Dhakaanuu dhima baasuu dnada’a. TPLF uummata keenya lafa irraa dugugtee fixxuuf murteefatee jirti. Yoo of irratti lolle ammi tokkoon keenya illee hafuu dandeenya. Karaa danda’ame maraan of irraa ittisuu qabna. Dhumaatiin nu gahe jennee haa didnu.
Waan lola qabsoo ilaalu irratti tooftaa lolaa qabachuu nu barbaachisa. Diinni akkasi humna guddaa fi meeshaa jabaa qabu bakka laafaa isaa rukkutuun meeshaa saamuu dha. Bakka jabaa tahe miliquun nama baasa. Ishee qofaa baatee deemtu hin dhiifamtu. Bakka hojii lola uummataa qopheessuu fi qindeessuu Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi ABO akka jabeessanii irratti hojjetan waanan abdadhuuf asuma irrtti dhiisuun fedha.
Uummatni Oromoo biyyaa keessa jiru meeshaa qabun diina kana ka’ee of irraa ittisuu malee filmaata biraa hin qabu. Oromoon ala (diaspora) jiru kaara fedheenuu haa bahu dhumaatii kana jalaa oolee jira. Kana malees sababa adda addaan Oromoonni ala jiran gurmuu hin qaban. Saba kana irraa kan ka’e gargaarsi ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoof godhamuu amma barbaadamu tahee hin argamu. Uummata keenya dhumaatii jalaa oolshuuf namni Oromoo taanee dhalanne martuu yaroo dhiphuu akkasii irratti saba keenya wajjin dhaabbachuun gamnumaa gudhaa.Yaroo kana uummatni keenya meeshaa lolaa fi gargarsa horii akka isa barbaachisu hubatnee yaroon dirmachuuf nu barbaachisa.
« Ethiopian empire needs curative surgery instead of palliative one
DHUMAATII GAAFA IRREECHAA »